Dowlada Kenya oo Han Jabaadyadii Kooxda Alshabaab Jawaab Kulul Ka Bixisay - iftineducation.com
Dowlada Kenya oo Han Jabaadyadii Kooxda Alshabaab Jawaab Kulul Ka Bixisay
iftineducation.com – Dolwada Kenya ayaa sheegtay inaysan go’aansan doonin inay dib ciidamadooda ugala soo baxaan kadib weerarkii Westgate iyo hanjabaadii uga timid dhinaca Al Shabaab.
“…Waxaan markii hore u galnay dalka Soomaaliya maadaama Al Shabaab ay khatar ku noqotay amaanka Kenya, waana sii wadaynaa hawlgalkaasi illaa laga xaqiijinayo danaha iyo amaanka dalka…” ayuu yiri wasiirka Arrimaha Gudaha ee dalka Kenya Mr.Joseph Olelenka.
Jawaabta Wasiirka ayaa ku socotay hadal kasoo yeeray hogaanka Al Shabaab oo ku tilmaamay weerarkii Westgate mid lagu ciqaabayey kaalinta Kenya ay ka qaadatay dagaalka ka socda gudaha Soomaaliya iyo ciidamadeeda la wareegay qeybo kamid ah koonfurta Soomaaliya.
Maalinimadii Shalay ayaa ku ekayd sadexdii maalmood ee baroordiiqda ah iyadoo dalka Kenya ay ka dhaceen aaska qaar kamid ah dadkii ku dhintay weeraradii Westgate, waxaana dadkaasi kamid ahaa Wiil uu abti u ahaa Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka qeyb galay aaska loo sameeyey wiil ay dhashay walaashiis oo kamid ahaa dadkii lagu dilay xarunta Westgate.
Dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa gaaraya 67 qof walow weli meydadkoodii la la’a yahay dad ku dhaw 70 ruux.
Marka laga yimaado dadka Kenyaanka ah ee ku dhintay weeraradaasi waxaa jira sidoo kale dad kale oo ajaanib ah oo weerarkaasi lagu dilay, kuwaasi oo kasoo kala jeeday dalalka, Somalia, Britain, Canada, China, France, the Netherlands, India, South Africa iyo South Korea.
Silvio Berlusconi oo wasiiradiisii kala baxay Xukuumada Italy